မှတ်တမ်း | Thaing Wizard
Tag Archives: မှတ်တမ်း
Posted on January 23, 2015 by Aung Thu Htet
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ (၁၈-၁-၂၀၁၅) မှာ သုဝဏ္ဏမိုးလုံလေလုံအားကစားရုံမှာ စက္ကဗျူဟာပင်မသိုင်း ကာယ-စိတ္တ-သိဒ္ဓိစွမ်းအားကျင့်စဉ်အဖွဲ့၏ သိဒ္ဓိစွမ်းရည်နှင့် ကာယစွမ်းအားကျင့်စဉ်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်များပြပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
စက္ကဗျူဟာပင်မသိုင်းအဖွဲ့၏ သိုင်းပညာပြပွဲ မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုဖိုင်
File Size – 193 MB
Running time – 46 Minutes
အဲ့ဒီပွဲနေ့က ကျွန်တော်လည်း အားနေတာနဲ့ သွားရောက်လေ့လာပြီး အားပေးခဲ့ပါတယ်။ မှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယိုကိုလည်း ရိုက်ကူးခဲ့တာမို့ ၀ါသနာရှင်တွေ လေ့လာရအောင် ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ပြန်တင်ပေးလိုက် ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Live Streaming တော့ မလုပ်ပေးဖြစ်တော့ဘူးဗျာ။ Youtube တွေ ဘာတွေမှာ တင်ဖို့ကလည်း ကွန်နက်ရှင်က အဆင်မပြေလှတာကြောင့် ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ဒီအတိုင်းပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ download ရယူနိုင်ပါပြီ။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ အနည်းငယ်ကြီးပါလိမ့်မယ်။ 193 MB ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတောင် mp4 ဆိုရင် ဖိုင်ဆိုဒ်တအားကြီးသွားမှာမို့ flv ဖိုင်နဲ့ပဲ လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာနဲ့ ရိုက်ကူးထားတာ မဟုတ်တာရယ်၊ အဝေးကနေ Zoom ဆွဲပြီး ရိုက်ထားရတာရယ်ကြောင့် အနည်းငယ် အဆင်မပြေမှုများရှိပါက သည်းခံပြီး ကြည့်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးပါ။
Posted in Bando, Banshay, Inner Engrgy, Martial Arts, Martial Arts Video, Meditation, News, Pwe Kyaung	| Tagged စက္ကဗျူဟာ, တရားထိုင်ခြင်း, ပွဲကျောင်း, ဗန်တို, ဗန်ရှည်, မှတ်တမ်း, လက်ဝှေ့, သတင်း, အတွင်းအား	|2Replies
Page Layout ပြင်ထားသော စာအုပ်များနှင့် ဆောင်းပါးများ
Posted on December 19, 2014 by Aung Thu Htet
ယခု upload တင်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေကတော့ Thaing Wizard မှာ အရင်ထဲက တင်ထားပြီးသားတွေကို update ပြန်လုပ်ထားတာတွေပါ။ အရင်လုပ်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေမှာ paper size ကြောင့် စာဖတ်ရ အစဉ်မပြေတာတွေရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကို layout အသစ်၊ size အသစ်နဲ့ ဖတ်ရှုရအစဉ်ပြေအောင် ပြန်လည်ပြုလုပ်ထားတာပါ။
Update လုပ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကို အောက်မှာ download ယူနိုင်ပါပြီ။
၁။ မြန်မာ့ထိုးကွင်းမင်ကြောင်ဓလေ့ (ဆင်ဖြူကျွန်းအောင်သိန်း)
Download (File Size – 5.82 MB)
၂။ မြန်မာနိုင်ငံသိုင်း အဖွဲ့ချုပ် မြန်မာ့ကိုယ်ခံပညာ နိသျည်းများ
Download (File Size – 3.88 MB)
၃။ လျှို့ဝှက်သော ဗန်တို၊ ဗန်ရှည် နည်းများ (သိုင်းဦးချစ်သန်း)
လျှို့ဝှက်သော ဗန်တို၊ ဗန်ရှည် နည်းများ (သိုင်းဦးချစ်သန်း)
Download (File Size – 16.4 MB)
၄။ ထိုင်း လက်ဝှေ့ (ကွန်ဖူးစိုးမြင့်)
ထိုင်း လက်ဝှေ့ (ကွန်ဖူးစိုးမြင့်)
Download (File Size – 3.48 MB)
၅။ လူတိုင်းအတွက် လျှပ်တစ်ပြက် ကိုယ်ခံပညာ (ကွန်ဖူးစိုးမြင့်)
လူတိုင်းအတွက် လျှပ်တစ်ပြက် ကိုယ်ခံပညာ (ကွန်ဖူးစိုးမြင့်)
Download (File Size – 4.37 MB)
၆။ ကိုရီးယားအဆင့်မြင့် ခြေကန်တိုက်နည်းပညာ (ဦးပြည်သိမ်း)
ကိုရီးယားအဆင့်မြင့် ခြေကန်တိုက်နည်းပညာ (ဦးပြည်သိမ်း)
Download (File Size – 7.74 MB)
၇။ အမေရိကန် ချက်ကောင်း တိုက်ကွက်များ (ကွန်ဖူးစိုးမြင့်)
အမေရိကန် ချက်ကောင်း တိုက်ကွက်များ (ကွန်ဖူးစိုးမြင့်)
နောက်ပြီး အရင်က ဆောင်းပါးပဲ တင်ထားခဲ့ပြီး ebook မလုပ်ရသေးတာ တစ်ချို့ကိုလည်း ebook လုပ်ပြီး တင်ပေးထားပါတယ်။
၁။ သမိုင်းထဲက အမေ့လျော့ခံ အားကစား (သို့မဟုတ်) ဗန်တို
သမိုင်းထဲက အမေ့လျော့ခံ အားကစား (သို့မဟုတ်) ဗန်တို
Download (File Size – 231 KB)
၂။ ဂါမ၀ါသီပွဲကျောင်း လက်ဝှေ့၊ သိုင်းအတတ်ပညာ အကျဉ်း
ဂါမ၀ါသီပွဲကျောင်း လက်ဝှေ့၊ သိုင်းအတတ်ပညာ အကျဉ်း
Download (File Size – 643 KB)
၃။ ဆရာကြီး ဗန်မော်သိန်းအောင်၏ လျှပ်စစ်လက်သီးထိုးနည်း
Download (File Size – 399 KB)
Posted in Aikido, Bando, Banshay, Boxing, Hwa Rang Do, Jiu-Jitsu, Judo, Karate, Kung Fu, Martial Arts, Martial Arts Article, Martial Arts Book, Muay Thai, Pwe Kyaung, Taekwondo	| Tagged ကရာတေး, ကွန်ဖူး, ကွန်ဖူးစိုးမြင့်, ဂျူဂျစ်ဆု, ဂျူဒို, စာအုပ်, ဆင်ဖြူကျွန်းအောင်သိန်း, ဆရာချယ်, ဆာမားတေး, တက်တူး, ထိုးကွင်းမင်ကြောင်, နပန်း, ပွင့်လန်း(သတ္တုတွင်း), ပွဲကျောင်း, ဗန်တို, ဗန်ရှည်, မှတ်တမ်း, လက်ဝှေ့, သိုင်းပြောင်းပြန်, ဟွရန်ဒို, အာကီဒို, ဦးချစ်သန်း, ဦးပြည်သိမ်း, မွေထိုင်း	| Leaveareply
မောင်လေးဆိုတဲ့ ပြောင်းပြန်မုန်တိုင်း စာအုပ်
အခုဆိုရင် Thaing Wizard မှာ update မလုပ်ဖြစ်တာ ကိုးလလောက်ရှိပါပြီ။ ဒီကနေ့တော့ update လုပ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ အသစ်တွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဆရာပွင့်လန်း(သတ္တုတွင်း)ရဲ့ “မောင်လေးဆိုတဲ့ ပြောင်းပြန်မုန်တိုင်း” စာအုပ်ပါ။ ယခုစာအုပ်ကို သိုင်းပြောင်းပြန်ဆရာ ကိုလူမင်း မှ ebook ပြုလုပ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မောင်လေးဆိုတဲ့ ပြောင်းပြန်မုန်တိုင်း (ပွင့်လန်း-သတ္တုတွင်း)
Download (File Size – 81.6 MB)
အရင်က တင်ထားဖူးတဲ့ သိုင်းပြောင်းပြန်စာအုပ်တွေကို download ရယူလိုတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။ တင်ခဲ့ဖူးသမျှ သိုင်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ၊ ဆောင်းပါးများကို download ရယူလိုတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
သိုင်းပြောင်းပြန်ပညာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားလို့ သင်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့
၁။ Myanmar Thaing Byaung Byan Association – မြန်မာနိုင်ငံသိုင်းပြောင်းပြန်အဖွဲ့ချုပ်
ဖုန်း – 09450030502
Website – http://itbba.org/
၂။ မြန်မာနိုင်ငံသိုင်းအဖွဲ့ချုပ် ဆရာဦးစိုးဝင်း ဦးစီးသော
ကမ္ဘောဇနန်းတွင်းခူးကာချန့် သိုင်းပြောင်းပြန် (ပင်မ)
အမှတ် (၇၃၆) ရန်မြေ (၁) လမ်း၊ ၂-တောင်ရပ်ကွက်၊
၃။ Thaing Byaung Byan (သိုင်းပြောင်းပြန်)
အမက-၂၅ ကျောင်းဝင်း၊ ဘုရင့်နောင်မီးသတ်ဘေးလမ်း၊ မရမ်းကုန်၊ ရန်ကုန်။
ဖုန်း – 0931289562
၄။ Thaing Byaung Byan (သိုင်းပြောင်းပြန်)
အမှတ် (၁၆)ဦးစံဖေလမ်း၊ ဆားကန်ကျောင်းတိုက် အနီး၊
(ဘုရားလမ်းမှတ်တိုင်)၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ဖုန်း – 09420067196
Facebook – www.facebook.com/lu.min.5688
၅။ Thaing Byaung Byan – သိုင်းပြောင်းပြန် (မန္တလေး)
၁၆-လမ်းနှင့် ၈၇လမ်းထောင့်၊ ပင်လယ်တိုက် ရွှေမန်းအုတ်ကျောင်း၊ မန္တလေး။
ဖုန်း – 09420779417, 0933033843
၆။ Thaing Byaung Byan – သိုင်းပြောင်းပြန် (ပုသိမ်)
ဖုန်း – 0931173901 (Ko Khin Maung Bo – Grandson of U Hla Thein)
အခြားသိုင်းပြောင်းပြန် သင်တန်းခွဲများ (ရန်ကုန်)
1. အမှတ် (၄၇၀) မဟော်သဓာလမ်း ၁၆ ရပ်ကွက်၊ ရွှေပေါက္ကံ၊ (အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး နံနက် 8:30-10:00AM)
2. အမှတ် (၂၁၅) ဇီဝစိုးလမ်း ၁၄ ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာ (စနေ၊ တနင်္ဂနွေ 8:30-10:00AM)
3. အမှတ် (၁၄၄) ၁၃လမ်း၊ ၁ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း (စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၊ 2:00-3:30PM/4:5:30)
4. အမှတ် (၁၆)ဦးစံဖေလမ်း၊ ဆားကန်ကျောင်းတိုက် အနီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။
Posted in Bando, Banshay, Martial Arts, Martial Arts Book, Pwe Kyaung, Thaing Byaung Byan	| Tagged စာအုပ်, ဆရာချယ်, ပွင့်လန်း(သတ္တုတွင်း), ပွဲကျောင်း, ဗန်တို, ဗန်ရှည်, မှတ်တမ်း, သိုင်းပြောင်းပြန်	| Leaveareply
အတွင်းအားပညာနှင့် ထူးခြားသော လျှို့ဝှက်ကျင့်စဉ်များ
Posted on February 17, 2014 by Aung Thu Htet
ဘာလိုလိုနဲ့ post အသစ်တွေ ထပ်မတင်ဖြစ်တာတောင် သုံးလလောက်ရှိသွားပါပြီ။ ဒီကနေ့တော့ ကိုစိုးကြီးဆီက ရထားတဲ့ အတွင်းအားနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဆောင်းပါးစုစည်းမှု စာအုပ်ကလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မတင်ဖြစ်သေးတဲ့ အသစ်တွေရှိပါသေးတယ်။ မအားသေးလို့ ဘာမှမလုပ်ဖြစ်တာပါ။ နောက်ရက်များမှ အဆင်သင့်သလို အသစ်တွေ ထပ်တင်ပေးပါဦးမယ်ဗျာ။ အသစ်တွေ မတင်ဖြစ်တဲ့ကြားက visitor ဦးရေ ကျမသွားတာကို များစွာ ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း website ကို ဆက်လည်ပတ်ဖို့ အားအင်တွေရနေတာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးပါ။
အတွင်းအားပညာနှင့် ထူးခြားသော လျှို့ဝှက် ကျင့်စဉ်များ
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ ebook ကလေးထဲမှာ ပါဝင်တာတွေကတော့…
၁။ Intrinsic Energy (ချီ<သို့>အတွင်းအား)
၂။ အဆင့်မြင့်ကွန်ဖူးပညာရှင်၏ စွမ်းရည်များ
၃။ ကွန်ဖူးပညာရှင်များ၏ လျှို့ဝှက်ကျင့်စဉ်(၁)
၄။ အင်းဝခေတ် ရှေးမြန်မာကြီးများ၏ အသက်ရှူကျင့်စဉ်
၅။ ကွန်ဖူးပညာရှင်များ၏ လျှို့ဝှက်ကျင့်စဉ်များ(၂)
၆။ ရှေးဟောင်း တရုတ်ကျန်းမာရေး ချိကုန်းကျင့်စဉ်
၇။ ကွန်ဖူးပညာရှင်များ၏ လျှို့ဝှက်ကျင့်စဉ်(၃)
၈။ ကွန်ဖူးပညာရှင်များ၏ လျှို့ဝှက်ကျင့်စဉ်(၄)
ဆိုပြီး ဆောင်းပါး(၈)ပုဒ် ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ download ရယူနိုင်ပါပြီ။
File Size – 3.92 MB
Posted in Bando, Banshay, Inner Engrgy, Kung Fu, Martial Arts, Martial Arts Article, Martial Arts Book, Meditation, Pwe Kyaung, Taijiquan, Wing Chun	| Tagged ကွန်ဖူး, ကွန်ဖူးစိုးမြင့်, စာအုပ်, တရားထိုင်ခြင်း, ထိုက်ကျိချွမ်, ပွဲကျောင်း, ဗန်တို, ဗန်ရှည်, မှတ်တမ်း, လက်ဝှေ့, အတွင်းအား, ဆောင်းပါး, ရှောင်လင်, ၀င်းချွန်း, ၀ူရှူး	|2Replies
Posted on July 18, 2013 by Aung Thu Htet
သိုင်းပြောင်းပြန်ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် လာပါပြီ ဒီမှာ…
သိုင်းပညာမှာ အမျိုးအစား သုံးမျိုးခွဲလို့ရတယ်။ အကသိုင်း၊ အပြသိုင်းနဲ့ အချသိုင်း လို့ ဖြစ်တယ်။ ပြောင်းပြန်က အချသိုင်းဖြစ်တယ်။ ကြမ်းတယ်၊ ရမ်းတယ်၊ လုပ်ရင် အပြတ်လုပ်တယ်။ အဲ… ကြည့်လို့တော့ မလှဘူး။ အဲဒါပြောင်းပြန်ပဲ… သေနတ်မှာ မောင်းပြန်၊ သိုင်းမှာ ပြောင်းပြန်၊ ပြောင်းပြန်ကို တောင်းပန်ရင် တောင်းပန်၊ မတောင်းပန်ရင် နှာခေါင်းလန်မဟေ့… လို့ စာချိုးယူရတဲ့ ပညာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြောင်းပြန်ပညာ၊ သို့မဟုတ်၊ သိုင်းပြောင်းပြန်ပညာကို မြန်မာပြည် (ပြည်မ) တွင် စတင်ပို့ချသွားသူမှာ ဆရာကြီး ဦးမောင်လေး၏ ဆရာ၊ ဆရာကြီး ဦးချယ်၊ သို့မဟုတ်၊ ရှမ်းအမျိုးသား သိုင်းဆရာကြီး ဆရာချယ် ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာကြီး ဦးချယ်သည် ရှမ်းပြည်မှ ဆင်းလာသူ သိုင်းဆရာကြီး ဖြစ်သော်လည်း မည်သည့်မြို့ရွာတွင် နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ မည်သည့် စော်ဘွားထံတွင် အမှုထမ်းခဲ့ကြောင်းကား ဆရာကြီး ဦးမောင်လေး ကိုယ်တိုင်ပင် မသိခဲ့ရပေ။
ထို့ကြောင့် ဆရာကြီး ဦးချယ်တွင် သင်ဆရာရှိသည်၊ မရှိသည်ကိုလည်း မသိရ၊ ဆရာကြီး ဦးချယ်သည် ဤ သိုင်းပြောင်းပြန်ပညာကို တီထွင်ခဲ့သူလော၊ တီထွင်သော ဆရာ တစ်စုံတစ်ယောက်ထံမှ သင်ယူခဲ့ခြင်းလော ဆိုသည်ကို ယနေအထိ မသိရပါ။ ဆရာကြီး ဦးချယ်သည် (၁) ဆရာကြီး ဦးမောင်လေး၊ (၂) ဆရာကြီး ဦးလုံ (၃) ဆရာကြီး သောမ (ခေါ်) ဦးရွှေလှတို့ သုံးယောက်ကို ပညာသင်ပေးသွားခဲ့သည်။ ဆရာကြီး ဦးလုံနှင့်၊ ဦးသောမတို့သည် တပည့် မမွေးပါ။
ဆရာကြီး ဦးမောင်လေးသည် သိုင်းပြောင်းပြန်ပညာကို ၁၆ နှစ်သားတွင် စတင်သင်ယူခဲ့၍၊ ၁၉ နှစ်သားတွင် ဆရာဖြစ်ယူခဲ့ပါသည်။ ၁၂၈၀ ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာပြည်အနှံ့ သိုင်းပြောင်းပြန်ပညာကို ဖြန့်ဖြူးခဲ့ပါသည်။ တပ်မတော်သားများ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ရန်ကုန်ပင်မတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ကြည်မြင်တိုင်နယ်မြေ)၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ဗိုလ်တထောင်နယ်မြေ)၊ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၊ စက်မှုတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ်နှင့် ကျောင်းသားလူငယ်၊ အလုပ်သမားများစွာတို့ကို သင်ကြားပို့ချခဲ့ပါသည်။
လက်ရှိမှာတော့ ဆရာကြီး ဦးမောင်လေး မရှိတော့ပါ။ သို့သော်လည်း ဆရာကြီး ဦးအောင်သိန်း (သန်လျင်) မှ သိုင်းပြောင်းပြန် ပင်မဦးစီးဆရာကြီးအနေဖြင့် သိုင်းပြောင်းပြန်ပညာများ ဆက်လက်ပြန့်ပွားရေး အတွက် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
ကဲ… သိုင်းပြောင်းပြန်ကို စိတ်ဝင်စားသွားကြပြီလား။ အဲ့ဒီအတွက်တော့ အောက်မှာ သိုင်းပြောင်းပြန်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာအုပ်အချို့ကို တင်ပေးထားပါတယ်။ Download ရယူနိုင်ပါပြီဗျာ…
၁။ သိုင်းပြောင်းပြန် ပြောင်းပြန်မောင်လေး
By အမျိုးသားစာပေဆုရ စာရေးဆရာ ပွင့်လန်း (သတ္တုတွင်း)
သိုင်းပြောင်းပြန် ပြောင်းပြန်မောင်လေး (ပွင့်လန်း – သတ္တုတွင်း)
သိုင်းပြောင်းပြန်ဆရာကြီး ဦးမောင်လေး၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်၊ အလွန်ကောင်းသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်ဖြစ်သော်လည်း ၀တ္တုအသွင်ဖြင့် ရေးသားထားသဖြင့် မပျင်းမရိ တစ်ထိုင်တည်းဖြင့် ဖတ်ချင်စဖွယ်ဖြစ်သည့် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်သည်။
ဤစာအုပ်ကို khtnetpc.webs.com မှ ebook ပြုလုပ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၂။ ကမ္ဗောဇနန်းတွင်းခူးခါချန့် သိုင်းပြောင်းပြန်လက်သိုင်း [ပထမတွဲ]
By ဆရာကြီး ဦးအောင်သိန်း (သန်လျင်)
ကမ္ဗောဇနန်းတွင်းခူးခါချန့် သိုင်းပြောင်းပြန်လက်သိုင်း [ပထမတွဲ] (ဦးအောင်သိန်း – သန်လျင်)
သိုင်းပြောင်းပြန်ဆရာကြီး ဦးမောင်လေး၏ တပည့်ရင်း၊ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သိုင်းပြောင်းပြန် ပင်မဦးစီးဆရာကြီးအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသူ ဆရာကြီး ဦးအောင်သိန်း (သန်လျင်) ကိုယ်တိုင် ဆရာကြီး ဦးမောင်လေး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ရေးသားခဲ့သော သိုင်းပြောင်းပြန်လက်သိုင်းကျင့်နည်း စာအုပ်ဖြစ်သည်။ သိုင်းပြောင်းပြန်ပညာကို ၀ါသနာပါသူတို့အတွက် မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်သော စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်သည်။
ဤစာအုပ်သည် Thaing Wizard မှ ပြုလုပ်သော စာအုပ်မဟုတ်ပါ။ ၀ါသနာရှင်တစ်ယောက်မှ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြုလုပ်သူမည်သူမှန်းကိုတော့ ကျွန်တော်ပင် သိခွင့်မရခဲ့ပါ။ ယမန်နေ့က Thaing Wizard ၏ email သို့ ဤစာအုပ်ကို ပေးပို့ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပေးပို့သူအမည်နှင့် အဘယ်ကြောင့်ပေးပို့ခဲ့သည်ကို ထည့်သွင်းမဖော်ပြခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါပေးပို့သော အမည်မသိပုဂ္ဂိုလ်အား လွန်စွာကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ဒီနေရာကနေ ပြောပါရစေဗျာ။ နောက်လဲ အခုလိုပဲ ပေးပို့နိုင်ပါကြောင်း… နောင်အခါများတွင် ပေးပို့သူ၏ အမည်လောက်ကိုတော့ ထုတ်ဖော်အသိပေးစေလိုပါကြောင်း…
မကြာခင်မှာ သိုင်းပြောင်းပြန်နဲ့ ပတ်သတ်တာတွေ ထပ်တင်ပေးဖို့လည်း ရှိပါသေးကြောင်း၊ ဆက်လက်ပြီး စောင့်မျှော်အားပေးနေကြစေလို့ပါကြောင်းလည်း တစ်ခါတည်း အသိပေးလိုက်ပါရစေဗျာ…
Posted in Bando, Banshay, Martial Arts, Martial Arts Book, Martial Arts Video, Pwe Kyaung, Thaing Byaung Byan	| Tagged စာအုပ်, ဆရာချယ်, ပွင့်လန်း(သတ္တုတွင်း), ပွဲကျောင်း, ဗန်တို, ဗန်ရှည်, မှတ်တမ်း, သိုင်းပြောင်းပြန်, ဦးအောင်သိန်း(သန်လျင်)	| 40 Replies
Posted on April 24, 2013 by Aung Thu Htet
ဒီတစ်ခါ တင်ပေးထားတာကတော့ Shaolin Warrior Training Documentary Video လေးပါ။ တစ်နာရီခွဲစာ ကြာပါတယ်။ Connection ကောင်းမယ်ဆိုရင် download ဆွဲပြီး သိမ်းထားသင့်ပါတယ်။
ဒါလေးကို ရှောင်လင်လျှို့ဝှက်ကျင့်စဉ် (၇၂) ပါး စာအုပ်နဲ့ တွဲကြည့်လို့ရအောင် တင်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမှတ်တမ်းဗီဒီယိုထဲမှာ Jet Li (ဂျက်လီ) ရဲ့ ငယ်ဘ၀အကြောင်းလည်း အနည်းငယ် ပါဝင်ပါတယ်။ Shaolin Warrior Training ဆိုတဲ့အတိုင်း ရှောင်လင်လျှို့ဝှက်ကျင့်စဉ် လေ့ကျင့်နည်းတွေကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရိုက်ကူးတင်ပြထားတာပါ။
ဥပမာတစ်ခုဆိုရင် Mr. Bean ရဲ့ Johnny English Reborn ထဲက ပြကွက်မျိုး ပါတယ်ဗျာ။ ဇာတ်လမ်းအစမှာ Mr. Bean က တိဘက် (တရုတ်ပြည်) မှာ ရောက်နေတယ်လေ။ အဲ့ဒီမှာ သူ့ရဲ့ မအား (ကျားအင်္ဂါ) ကို ကျောက်ခဲဆွဲတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရတာ ကြည့်ဖူးသူတိုင်း သိပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါကို Iron Ball Skill လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကျင့်စဉ် အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ရဲ့ မအားဟာ မည်သည့်တိုက်ခိုက်မှုမျိုး မဆို ခံနိုင်ရည်ရှိလာပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ အဲ့လိုကျင့်ရသလဲဆိုရင် မအားဟာ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ အတွင်းအား ထည့်ပြီး တောင့်ခံလို့မရတဲ့ တစ်ခုတည်းသော နေရာဖြစ်လို့ပါတဲ့။
ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ။ တစ်ကယ်ကို စိတ်ဝင်စားစရာ ပြကွက်တွေကို သည်းတုန် အူတုန်ဖြစ်ရင်း မြင်တွေ့ရမယ်လို့ ရဲရဲကြီး အာမခံပါတယ်။
Posted in Kung Fu, Martial Arts, Martial Arts Video	| Tagged ကွန်ဖူး, ဗီဒီယို, မှတ်တမ်း, ရှောင်လင်	| 1 Reply